အကြောက်တရားကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း – Gentleman Magazine
အကွောကျတရားကို မိတျဆှဖှေဲ့ခွငျး (သို့) လုပျငနျးခှငျအတှကျ တှနျးအားတဈရပျ
အကြောက်တရားကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းခွင်အတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်
အကြောက်တရားဆိုတာ ရုံးတိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံး ခံစားမှု တစ်ခုပါ။ ပိုင်ရှင်၊ CEO၊ ဝန်ထမ်း အားလုံး ခံစားရပါတယ်။ ကျရုံးမှာကို ကြောက်ကြတယ်၊ နာမည်ပျက်မှာ ကြောက်ရတယ်၊ အောင်မြင်မှု မရမှာကို ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အကြောက်တရားတွေအကြောင်း ဖွင့်ပြောရဲသူ ရှားပါတယ်။
အကြောက်တရားဟာ အဆိုးချည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ သင့်ကို အနောက်က တွန်းအားပေးတဲ့ ကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုတောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းပြတဲ့ လောကမှာ ကျရှုံးမှာ ကြောက်တဲ့ စိတ်ဟာ သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
သင် အကြောက်တရားနဲ့ မိတ်ဖွဲ့နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ ရပ်ကတော့
သင်ဟာ စက်ရုပ်မဟုတ်သလို စူပါလူသားလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ တာဝန်ယူရမှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်မှုတွေကြားမှာ အကြောက်တရားဟာ ပုံမှန် ဖြစ်လာပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကို ဖက်တွယ်လိုက်ပါ။ သင် အကြောက်တရားကို အကောင်းဘက်က စဉ်းစားနိုင်ရင် အဲဒါဟာ အားနည်းချက် မဟုတ်တော့ပဲ တွန်းအား ဖြစ်လာပါတယ်။ အကြောက်တရားဟာ ကောင်းကောင်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု ပိုမိုဖြစ်စေပြီး အလောသုံးဆယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၂. လေ့လာပါ။ မတုန်လှုပ်ပါနဲ့။
အကြောက်တရားဟာ သင့်ကို တုန်လှုပ်စေပြီး ပြသနာတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်း မစဉ်းစားမိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အကြောက်တရားကို ကြီးထွားခွင့် မပေးပါနဲ့။ ဆန်းစစ်လေ့လာပါ။ ” ငါ့ကို ပေးထားတဲ့ အချိန်တိုလွန်းလို့ ငါကြောက်နေတာလား ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်မေးပါ။ ပြသနာတွေကို တစ်ပိုင်းချင်းစီ ခွဲ ဆောင်ရွက်လိုက်ရင် အကြောက်တရားကို တော်လှန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၃. ဖိအားကို ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပါ
စိန်ခေါ်ခံရတာ ကောင်းပါတယ်။ ပြသနာတွေ တွေ့ရမှာ၊ ရက်ပိုင်းအတွင်း အပြီးလုပ်ရမှာ ဆိုတဲ့ အလုပ်တွေဟာ ကိုယ့်ဘာသာ မယုံကြည်တဲ့ လူတွေအဖို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလို့ အောင်မြင်သွားရင် အားဖြစ်စေပါတယ်။ ကြောက်ရွံခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ဖိအားကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခွင့် ပေးပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှု အတိုင်း လိုက်လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် ဝါးမျိုခံရမှာပဲဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အားပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနည်းကို သုံးပါတယ်။ လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ ပြသနာကို စာရွက်ပေါ်မှာ အကြမ်းရေးချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာပါတယ်။ အကြိမ်များစွာ ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့ ပြသနာဟာ ထင်သလောက် မကြီးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သင် အကြောက်တရားကနေ အမြတ်မရှာခင် ဖိအားကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ဗျူဟာတစ်ရပ် လိုပါလိမ့်မယ်။
၄. သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အားပေးမည့်သူ ရှာပါ
သင့်ဘေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိရင် ကြောက်စိတ် လျော့သွားပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်း ကြမ်းနေတာမြင်ရင် သင့်ကိုယ်သင် စိတ်ချရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ပညာရှင် အကြံပေးတွေနဲ့ ဝန်းရံထားပါ။ သင်သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ကို ဖိအား အရမ်းများနေတယ်၊ အပန်းဖြေ ထွက်သင့်တယ် အကြံပေးရင် သူတို့ကို ယုံလိုက်ပါ။ သင် တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးလို့ သိထားတဲ့ အသိက အရမ်းအားရဖို့ ကောင်းပါတယ်။
၅. ပြသနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို သိပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများ ဖိအားတွေ အကြောက်တရားတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရတာကတော့ သူတို့က ပြသနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို မရှာတတ်လို့ပါပဲ။ အတွေ့အကြုံရှိသူတွေကတော့ ပြသနာဟာ လူတွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဆိုတဲ့ အရင်းအမြစ်နေရာသုံးခုရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ပြသနာရှိမယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။
ပထမ ခြေလှမ်းက မကြောက်ပါနဲ့။ လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပြသနာကို ရဲရဲကြည့်ပါ။ သင် ထင်ထားသလောက် ကြောက်ဖို့ မကောင်းပါဘူး။ ပြီးရင် ပြသနာသေးသေးလေးအတွက် လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုလုံးကို ပြန်မစီစဉ်ပါနဲ့။ သင့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေကို ကြည့်ပါ။ သင့် ထုတ်ကုန်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ကြည့်ပါ။ ထုတ်ကုန် စီးဆင်းမှုကို ကြည့်ပါ။ ပြသနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ရှာတွေ့ရင် ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်ပြတ်သားသား တစ်ခု ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်း အကြောက်တရား ခံစားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အကြောက်တရားကို အရင်းအမြစ်ရှာပြီး တွန်းအားအဖြစ် သုံးနိုင်ရင် သင် သာမန်လူထဲက ကွဲထွက်ပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင် စောစော အကြောက်တရားကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လေးစားလေလေ၊ သင် အကြောက်တရားကို သင့်လုပ်ငန်း တိုးတက်အောင် တွန်းအားအဖြစ် စောစော သုံးနိုင်လေလေပါပဲ။
အကွောကျတရားဆိုတာ ရုံးတိုငျးမှာ အကွီးမားဆုံး ခံစားမှု တဈခုပါ။ ပိုငျရှငျ၊ CEO၊ ဝနျထမျး အားလုံး ခံစားရပါတယျ။ ကရြုံးမှာကို ကွောကျကွတယျ၊ နာမညျပကျြမှာ ကွောကျရတယျ၊ အောငျမွငျမှု မရမှာကို ကွောကျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ အကွောကျတရားတှအေကွောငျး ဖှငျ့ပွောရဲသူ ရှားပါတယျ။
အကွောကျတရားဟာ အဆိုးခညျြး မဟုတျပါဘူး။ အဲဒါဟာ သငျ့ကို အနောကျက တှနျးအားပေးတဲ့ ကောငျးတဲ့ အရာတဈခုတောငျ ဖွဈလာနိုငျပါသေးတယျ။ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးပွတဲ့ လောကမှာ ကရြှုံးမှာ ကွောကျတဲ့ စိတျဟာ သငျ့ရဲ့ မိတျဆှကေောငျးတောငျ ဖွဈလာနိုငျပါသေးတယျ။
သငျ အကွောကျတရားနဲ့ မိတျဖှဲ့နိုငျမယျ့ နညျးလမျး ၅ ရပျကတော့
သငျဟာ စကျရုပျမဟုတျသလို စူပါလူသားလဲ မဟုတျပါဘူး။ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ၊ တာဝနျယူရမှုတှေ၊ ဆုံးရှုံးနိုငျမှုတှကွေားမှာ အကွောကျတရားဟာ ပုံမှနျ ဖွဈလာပါပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ သူ့ကို ဖကျတှယျလိုကျပါ။ သငျ အကွောကျတရားကို အကောငျးဘကျက စဉျးစားနိုငျရငျ အဲဒါဟာ အားနညျးခကျြ မဟုတျတော့ပဲ တှနျးအား ဖွဈလာပါတယျ။ အကွောကျတရားဟာ ကောငျးကောငျး ထိနျးညှိပေးနိုငျရငျ ကိုယျ့ဘာသာ ထိနျးသိမျးနိုငျမှု ပိုမိုဖွဈစပွေီး အလောသုံးဆယျ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခမြိခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။
၂. လလေ့ာပါ။ မတုနျလှုပျပါနဲ့။
အကွောကျတရားဟာ သငျ့ကို တုနျလှုပျစပွေီး ပွသနာတှအေကွောငျး ကောငျးကောငျး မစဉျးစားမိနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျပါတယျ။ အကွောကျတရားကို ကွီးထှားခှငျ့ မပေးပါနဲ့။ ဆနျးစဈလလေ့ာပါ။ ” ငါ့ကို ပေးထားတဲ့ အခြိနျတိုလှနျးလို့ ငါကွောကျနတောလား ” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုး ကိုယျ့ဘာသာ ပွနျမေးပါ။ ပွသနာတှကေို တဈပိုငျးခငျြးစီ ခှဲ ဆောငျရှကျလိုကျရငျ အကွောကျတရားကို တျောလှနျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၃. ဖိအားကို ကိုယျ့နညျး ကိုယျ့ဟနျနဲ့ ကိုငျတှယျပါ
စိနျချေါခံရတာ ကောငျးပါတယျ။ ပွသနာတှေ တှရေ့မှာ၊ ရကျပိုငျးအတှငျး အပွီးလုပျရမှာ ဆိုတဲ့ အလုပျတှဟော ကိုယျ့ဘာသာ မယုံကွညျတဲ့ လူတှအေဖို့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးလို့ အောငျမွငျသှားရငျ အားဖွဈစပေါတယျ။ ကွောကျရှံခွငျးဟာ ကြှနျတျောတို့ကို ဖိအားကို ကိုငျတှယျဖွရှေငျးခှငျ့ ပေးပါတယျ။ စိနျချေါမှု အတိုငျး လိုကျလုပျရငျလုပျ၊ မလုပျရငျ ဝါးမြိုခံရမှာပဲဆိုတဲ့ ကွောကျစိတျဟာ ကြှနျတျောတို့ကို အားပေးပါတယျ။
ကြှနျတျောကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ရငျဆိုငျဖွရှေငျးနညျးကို သုံးပါတယျ။ လကျရှိကွုံနရေတဲ့ ပွသနာကို စာရှကျပျေါမှာ အကွမျးရေးခလြိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ ကွောကျရှံ့ခွငျးရဲ့ အရငျးအမွဈတှကေို ရှာပါတယျ။ အကွိမျမြားစှာ ကြှနျတျောထငျနတေဲ့ ပွသနာဟာ ထငျသလောကျ မကွီးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ သငျ အကွောကျတရားကနေ အမွတျမရှာခငျ ဖိအားကို ကိုငျတှယျဖို့ ဗြူဟာတဈရပျ လိုပါလိမျ့မယျ။
၄. သငျ့ပါတျဝနျးကငျြမှာ အားပေးမညျ့သူ ရှာပါ
သငျ့ဘေးမှာ သူငယျခငျြးတှေ ရှိရငျ ကွောကျစိတျ လြော့သှားပါတယျ။ ရှဆေ့ကျရမယျ့လမျး ကွမျးနတောမွငျရငျ သငျ့ကိုယျသငျ စိတျခရြတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ ပညာရှငျ အကွံပေးတှနေဲ့ ဝနျးရံထားပါ။ သငျသူငယျခငျြးတှကေ သငျ့ကို ဖိအား အရမျးမြားနတေယျ၊ အပနျးဖွေ ထှကျသငျ့တယျ အကွံပေးရငျ သူတို့ကို ယုံလိုကျပါ။ သငျ တဈယောကျထဲ မဟုတျဘူးလို့ သိထားတဲ့ အသိက အရမျးအားရဖို့ ကောငျးပါတယျ။
၅. ပွသနာရဲ့ အရငျးအမွဈကို သိပါ
စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ တျောတျောမြားမြား ဖိအားတှေ အကွောကျတရားတှနေဲ့ ရုနျးကနျနရေတာကတော့ သူတို့က ပွသနာရဲ့ အရငျးအမွဈကို မရှာတတျလို့ပါပဲ။ အတှအေ့ကွုံရှိသူတှကေတော့ ပွသနာဟာ လူတှေ၊ ထုတျကုနျတှေ၊ လုပျငနျးစဉျတှေ ဆိုတဲ့ အရငျးအမွဈနရောသုံးခုရဲ့ တဈနရောရာမှာ ပွသနာရှိမယျဆိုတာ သိကွပါတယျ။
ပထမ ခွလှေမျးက မကွောကျပါနဲ့။ လကျထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ပွသနာကို ရဲရဲကွညျ့ပါ။ သငျ ထငျထားသလောကျ ကွောကျဖို့ မကောငျးပါဘူး။ ပွီးရငျ ပွသနာသေးသေးလေးအတှကျ လုပျငနျးကွီး တဈခုလုံးကို ပွနျမစီစဉျပါနဲ့။ သငျ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့ ပူးတှဲလုပျဆောငျမှု အခွအေနကေို ကွညျ့ပါ။ သငျ့ ထုတျကုနျရဲ့ လုပျဆောငျနိုငျမှုကို ကွညျ့ပါ။ ထုတျကုနျ စီးဆငျးမှုကို ကွညျ့ပါ။ ပွသနာရဲ့ အရငျးအမွဈကို ရှာတှရေ့ငျ ဆုံးဖွတျခကျြ ပွတျပွတျသားသား တဈခု ခနြိုငျပါလိမျ့မယျ။
လူတိုငျး အကွောကျတရား ခံစားရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ အကွောကျတရားကို အရငျးအမွဈရှာပွီး တှနျးအားအဖွဈ သုံးနိုငျရငျ သငျ သာမနျလူထဲက ကှဲထှကျပွီး အကောငျးဆုံး လုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ သငျ စောစော အကွောကျတရားကို အသိအမှတျပွုပွီး လေးစားလလေေ၊ သငျ အကွောကျတရားကို သငျ့လုပျငနျး တိုးတကျအောငျ တှနျးအားအဖွဈ စောစော သုံးနိုငျလလေပေါပဲ။
Previous: အချိန်ဆွဲခြင်း ရပ်တန့်စေဖို့ နည်းလမ်း ၇ ခု
Next: ယောက်ျားတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပြသနာများ